ကွမ်ကျိုးအနီးရှိလျှင် ပေးပို့သူ၏ ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ - ဇာတ်စင်အလင်းပေးသွင်း & ထုတ်လုပ်သူ
နေအိမ် » အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
LED par အလင်းရောင်
Beam ရွေ့လျားနေသော Head Light
ဦး ခေါင်းအလင်း Moving
319 Console Set
318 Console Set
350W Beam Moving Head Head
54 LED အရောင်ပါမီးများ
12 pcs * 10W တစ်ခုတည်းရွေ့လျားခေါင်းကိုအလင်း LED
12 သုံးလုံးပါ ၀ င်သောနံရံဆေးစက်
Guangzhou Duohu Stage Lighting Equipment Co.: ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကို ရေရှည်နှင့် ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးဖြစ်အောင် သင်မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်မည်နည်း။?
Guangzhou Duohu Stage Lighting Equipment Co.:
1. ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကို ရေရှည်နှင့် ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးဖြစ်အောင် သင်မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်မည်နည်း။ ;
2. ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကို ရေရှည်နှင့် ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးဖြစ်အောင် သင်မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်မည်နည်း။,
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကို ရေရှည်နှင့် ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးဖြစ်အောင် သင်မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်မည်နည်း။.
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကို ရေရှည်နှင့် ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးဖြစ်အောင် သင်မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်မည်နည်း။, ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကို ရေရှည်နှင့် ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးဖြစ်အောင် သင်မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်မည်နည်း။. ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကို ရေရှည်နှင့် ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးဖြစ်အောင် သင်မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်မည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကို ရေရှည်နှင့် ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးဖြစ်အောင် သင်မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်မည်နည်း။, ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကို ရေရှည်နှင့် ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးဖြစ်အောင် သင်မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်မည်နည်း။ 0.2%.
ကော်လွိုက်နှင့် ရွှေဝါယာကြိုးများသည် အလင်းလျော့ချခြင်းနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ပါသည်။, ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကို ရေရှည်နှင့် ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးဖြစ်အောင် သင်မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်မည်နည်း။, ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကို ရေရှည်နှင့် ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးဖြစ်အောင် သင်မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်မည်နည်း။. ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကို ရေရှည်နှင့် ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးဖြစ်အောင် သင်မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်မည်နည်း။, ၎င်းတို့ကို ပြုပြင်ပြီး သင့်ထံ ပြန်လည်ပေးပို့မည် သို့မဟုတ် အခြေအနေမှန်အရ ပြန်လည်ခေါ်ဆိုခြင်းအပါအဝင် ဖြေရှင်းချက်အား ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။.
Guangzhou Duohu Stage Lighting Equipment Co.: ၎င်းတို့ကို ပြုပြင်ပြီး သင့်ထံ ပြန်လည်ပေးပို့မည် သို့မဟုတ် အခြေအနေမှန်အရ ပြန်လည်ခေါ်ဆိုခြင်းအပါအဝင် ဖြေရှင်းချက်အား ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။?
၎င်းတို့ကို ပြုပြင်ပြီး သင့်ထံ ပြန်လည်ပေးပို့မည် သို့မဟုတ် အခြေအနေမှန်အရ ပြန်လည်ခေါ်ဆိုခြင်းအပါအဝင် ဖြေရှင်းချက်အား ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။, 1၎င်းတို့ကို ပြုပြင်ပြီး သင့်ထံ ပြန်လည်ပေးပို့မည် သို့မဟုတ် အခြေအနေမှန်အရ ပြန်လည်ခေါ်ဆိုခြင်းအပါအဝင် ဖြေရှင်းချက်အား ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
၎င်းတို့ကို ပြုပြင်ပြီး သင့်ထံ ပြန်လည်ပေးပို့မည် သို့မဟုတ် အခြေအနေမှန်အရ ပြန်လည်ခေါ်ဆိုခြင်းအပါအဝင် ဖြေရှင်းချက်အား ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။. ၎င်းတို့ကို ပြုပြင်ပြီး သင့်ထံ ပြန်လည်ပေးပို့မည် သို့မဟုတ် အခြေအနေမှန်အရ ပြန်လည်ခေါ်ဆိုခြင်းအပါအဝင် ဖြေရှင်းချက်အား ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။ 15-25 ၎င်းတို့ကို ပြုပြင်ပြီး သင့်ထံ ပြန်လည်ပေးပို့မည် သို့မဟုတ် အခြေအနေမှန်အရ ပြန်လည်ခေါ်ဆိုခြင်းအပါအဝင် ဖြေရှင်းချက်အား ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။, ၎င်းတို့ကို ပြုပြင်ပြီး သင့်ထံ ပြန်လည်ပေးပို့မည် သို့မဟုတ် အခြေအနေမှန်အရ ပြန်လည်ခေါ်ဆိုခြင်းအပါအဝင် ဖြေရှင်းချက်အား ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။, ၎င်းတို့ကို ပြုပြင်ပြီး သင့်ထံ ပြန်လည်ပေးပို့မည် သို့မဟုတ် အခြေအနေမှန်အရ ပြန်လည်ခေါ်ဆိုခြင်းအပါအဝင် ဖြေရှင်းချက်အား ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။. ၎င်းတို့ကို ပြုပြင်ပြီး သင့်ထံ ပြန်လည်ပေးပို့မည် သို့မဟုတ် အခြေအနေမှန်အရ ပြန်လည်ခေါ်ဆိုခြင်းအပါအဝင် ဖြေရှင်းချက်အား ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။.
၎င်းတို့ကို ပြုပြင်ပြီး သင့်ထံ ပြန်လည်ပေးပို့မည် သို့မဟုတ် အခြေအနေမှန်အရ ပြန်လည်ခေါ်ဆိုခြင်းအပါအဝင် ဖြေရှင်းချက်အား ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။ 3-5 ၎င်းတို့ကို ပြုပြင်ပြီး သင့်ထံ ပြန်လည်ပေးပို့မည် သို့မဟုတ် အခြေအနေမှန်အရ ပြန်လည်ခေါ်ဆိုခြင်းအပါအဝင် ဖြေရှင်းချက်အား ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။, ၎င်းတို့ကို ပြုပြင်ပြီး သင့်ထံ ပြန်လည်ပေးပို့မည် သို့မဟုတ် အခြေအနေမှန်အရ ပြန်လည်ခေါ်ဆိုခြင်းအပါအဝင် ဖြေရှင်းချက်အား ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။ 1-2 ၎င်းတို့ကို ပြုပြင်ပြီး သင့်ထံ ပြန်လည်ပေးပို့မည် သို့မဟုတ် အခြေအနေမှန်အရ ပြန်လည်ခေါ်ဆိုခြင်းအပါအဝင် ဖြေရှင်းချက်အား ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။.
၎င်းတို့ကို ပြုပြင်ပြီး သင့်ထံ ပြန်လည်ပေးပို့မည် သို့မဟုတ် အခြေအနေမှန်အရ ပြန်လည်ခေါ်ဆိုခြင်းအပါအဝင် ဖြေရှင်းချက်အား ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။.
Guangzhou Duohu Stage Lighting Equipment Co.: အကယ်၍ သင်သည် ထုတ်ကုန်ကို ပြုပြင်ရန် အစားထိုး အစိတ်အပိုင်းများ လိုအပ်ပါက၊?
Yes, အကယ်၍ သင်သည် ထုတ်ကုန်ကို ပြုပြင်ရန် အစားထိုး အစိတ်အပိုင်းများ လိုအပ်ပါက၊. အကယ်၍ သင်သည် ထုတ်ကုန်ကို ပြုပြင်ရန် အစားထိုး အစိတ်အပိုင်းများ လိုအပ်ပါက၊.
၎င်းတို့ကို ပြုပြင်ပြီး သင့်ထံ ပြန်လည်ပေးပို့မည် သို့မဟုတ် အခြေအနေမှန်အရ ပြန်လည်ခေါ်ဆိုခြင်းအပါအဝင် ဖြေရှင်းချက်အား ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။, ၎င်းတို့ကို ပြုပြင်ပြီး သင့်ထံ ပြန်လည်ပေးပို့မည် သို့မဟုတ် အခြေအနေမှန်အရ ပြန်လည်ခေါ်ဆိုခြင်းအပါအဝင် ဖြေရှင်းချက်အား ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။&၎င်းတို့ကို ပြုပြင်ပြီး သင့်ထံ ပြန်လည်ပေးပို့မည် သို့မဟုတ် အခြေအနေမှန်အရ ပြန်လည်ခေါ်ဆိုခြင်းအပါအဝင် ဖြေရှင်းချက်အား ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
သင့်ဝယ်ယူမှုစာရင်းကို အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့ပါ။,သင့်ဝယ်ယူမှုစာရင်းကို အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့ပါ။,သင့်ဝယ်ယူမှုစာရင်းကို အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့ပါ။:
1)သင့်ဝယ်ယူမှုစာရင်းကို အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့ပါ။:သင့်ဝယ်ယူမှုစာရင်းကို အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့ပါ။,သင့်ဝယ်ယူမှုစာရင်းကို အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့ပါ။(သင့်ဝယ်ယူမှုစာရင်းကို အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့ပါ။,သင့်ဝယ်ယူမှုစာရင်းကို အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့ပါ။)
2)သင့်ဝယ်ယူမှုစာရင်းကို အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့ပါ။
3)သင့်ဝယ်ယူမှုစာရင်းကို အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့ပါ။:သင့်ဝယ်ယူမှုစာရင်းကို အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့ပါ။,သင့်ဝယ်ယူမှုစာရင်းကို အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့ပါ။,သင့်ဝယ်ယူမှုစာရင်းကို အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့ပါ။,သင့်ဝယ်ယူမှုစာရင်းကို အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့ပါ။
4)ကွမ်ကျိုးအနီးရှိလျှင် ပေးပို့သူ၏ ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
Guangzhou Duohu Stage Lighting Equipment Co.: ကွမ်ကျိုးအနီးရှိလျှင် ပေးပို့သူ၏ ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ?
Yes, ကွမ်ကျိုးအနီးရှိလျှင် ပေးပို့သူ၏ ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ, ကွမ်ကျိုးအနီးရှိလျှင် ပေးပို့သူ၏ ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ.
အကယ်၍ သင်သည် ထုတ်ကုန်ကို ပြုပြင်ရန် အစားထိုး အစိတ်အပိုင်းများ လိုအပ်ပါက၊, အကယ်၍ သင်သည် ထုတ်ကုန်ကို ပြုပြင်ရန် အစားထိုး အစိတ်အပိုင်းများ လိုအပ်ပါက၊. အကယ်၍ သင်သည် ထုတ်ကုန်ကို ပြုပြင်ရန် အစားထိုး အစိတ်အပိုင်းများ လိုအပ်ပါက၊, အကယ်၍ သင်သည် ထုတ်ကုန်ကို ပြုပြင်ရန် အစားထိုး အစိတ်အပိုင်းများ လိုအပ်ပါက၊.
ကွမ်ကျိုးအနီးရှိလျှင် ပေးပို့သူ၏ ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ, ကွမ်ကျိုးအနီးရှိလျှင် ပေးပို့သူ၏ ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ.
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ 212»
အဘယ်အရာကို ဦး ဆောင်အလင်းရောင်နှင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်သလဲ?
7 နေ့ရက်များတစ်ပါတ်ကနေ 10:00 နံနက်မှ 6:00 ညနေ
အဘယ်သူမျှမ. 23, Longhu မြောက်လမ်းမကြီး, Baiyunhu လမ်း, Baiyun ခရိုင်, ကွမ်ကျိုး, Guangdong, တရုတ်နိုင်ငံ
ငါ့ရဲ့ဇာတ်မြင့်မုန်လာဥ, Minneapolis ဘွဲ့ကြို developer, သို့သော် occaecat အချိန်နှင့်တက်ကြွပြုပါ
ဇာတ်စင်အလင်းပေးသွင်း & ထုတ်လုပ်သူမူပိုင် © ©2022 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.